XOG RASMI AH:- Doorashada oo markii seddaxaad dib loo dhigaayo iyo guddiga doorashada oo shaacin doonno - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Doorashada oo markii seddaxaad dib loo dhigaayo iyo guddiga doorashada oo shaacin doonno
Waxaa markii seddaxaad laga yaabaa in doorashada sanadkaan ka dhici doonto dalka dib loo dhigo, kadib markii uu fashilmay qorshaha jadwalkii ugu dambeeyay oo ay soo saareen guddiga doorashada dadban ee dalka.
Guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dib u dhaca ku yimid doorashada Aqalka sare u sababeyn doonna inay weli harsan yihiin xubnaha matali lahaa maamulka Hirshabeele iyo Somaliland ee Aqalka Sare.
Ilo xog-ogaal ah aynu heleyno ayaa inoo xaqiijiyay in guddiga doorashada ay sheegi doonaan in arrinta Aqalka Sare ee maamulada Hirshabeele iyo Somaliland ay caqabad ku keentay in jadwalkii doorashada ee hore loo qorsheeyay, balse haatan dib loo badeli doonno maadaama ay suurto-gal ahayn in waqtiga la qabtay lagu soo dhameystiro.
Dhameystirka Aqalka sare iyo tan hoose ayuu guddiga sheegi doonnaa in la suurta-geliyo ilaa bisha Novembar 15-keeda ee sanadkaan 2016-ka, iyadoona markaasi kadib la guddo geli doonno doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale, guddiga ayaa sheegi doonno in jadwalka cusub ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qaban doonno dhamaadka bisha December ee sanadkaan 2016-ka, taas oo qorshaheeda hore ahaa in la qabto bisha November 30-keeda.
Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa dhowr jeer hore war-saxaafadeed kasoo saartay dib u dhaca markasta ku yimaada doorashada 2016-ka, iyadoo ka digtay falal cabsi gelin iyo musuq-maasuq ah oo ka jira nidaamka doorashada, waxaana shaki laga mujinayaa in doorashadu ku dhici karto xilliga loogu tala-galay.